Semalt Expert Suggestion On Prevention of Internet Threats
VaCybercriminals vari kutsvaga makombiyuta emakambani vachishandisa malware vachitarisira kubatsirwa nemashoko ekuuraya. Vakatama kubva pakatarisana nevatengi vezvinyorwa kune vashandi vanoita basa. Ikoko kune kuwedzera mitambo yekambani inotarirwa kune malware. Nzvimbo dzehutano, kushandiswa kwevashandi uye kushandiswa kwevashandi IT zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti kuwedzerwa kushamwaridzana kwehutano hwekambani kune malware. Zvinotyisidzira zvinoramba zvichiripo uye Trojans zvinogona kukanganisa uye kupindira deta yakajeka.
Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji ( Semalt , anopa mutungamiri unokosha wekudzivirira kutyisidzira kwekutengesa - buy servers on-line.
Pakutanga, chengetedza ipaki-seni yebhidhiyo yacho.
Vanopikisa havagoni kushandisa Adobe Acrobat kana Adobe reader kana Microsoft Internet Explorer kuti vasvike pane imwe nzira. Nguva ipi zvayo mavara akawanikwa, eiisa iyo pakarepo.
Chechipiri, chengetedza peer-to-peer kushandiswa.
Kubva pane imwe nzira yekugoverwa kwepurogiramu ndekugovana mafaira pamapuraneti kune peer-to-peer, fomu nekusimbisa mutemo we-peer-to-peer.
Chechitatu, kurega Windows AutoPlay.
Kuvhara network based virus sezvakaita Downadup uye Conficker kubva kumabhanhire kubva mumitambo yekutengesa pasina kuchinja kwemitemo yekambani pamasangano akazaruka.
Nhamba yechina, dzorera kuchengetedzwa kwakasimba muAdobe Reader.
PDF mafaira dzimwe nguva anovanza kurwisa. Kushungurudza Muverengi kunodzivirira mishonga kubva mukurwisana kwakadaro.
Zvadaro, kuderedza mitambo inoshandiswa kushandiswa.
Sezvo hutachiona hunofanirwa kupararira kuburikidza nemitambo yakabatana, mapurisa anofungidzirwa anofanirwa kuvharwa kunze kwekudiwa zvakakosha. Ipa mvumo yekuverenga chete uye kurega kuverenga-kunyora..
Ongorora kubudirira kwemasuo ekudzivirira uye kuchengetedzwa kwemashoko.
Nzvimbo dzekuchengetedzwa kwepaIndaneti uye inobudirira tsamba yekubatsira kuti uwane dambudziko risati yasvika pakombiyuta. Iva nechokwadi chekuchengetedzwa kwemashoko kuchengetedzwa kunowanikwa iyo inokwanisa kugadzirisa kakawanda. Ichaita kuti zvione kutyisidzirwa kwemajeri kwemazuva ano, spam, uye kusvibisa mutumisi IPs.
Ongorora zvigadziro zvekuchengetedzwa kwemashoko.
Kusunungurwa kwehutachiona hunoitwa zvakajeka muzuva nevhiki nevhiki yePS content. Ongorora maitiro akawanda ane utachiona kana kunyange mishonga yose sezvo zvinyorwa zvinouya kana zvichibvira.
Chengetedza zvigadzirwa zvemagetsi kunyanya emafoni.
Zvigadzirwa zvemafaira zvinounza malware kune network seimwe PC inodzivirirwa. Izvi zvinoitika sezvo munhu wose ane tablet kana kuti smartphone anoshuvira kuwana iyo network.
Shandisa zvishandiso zvinopfuurira kupfuura antivirus.
Zvigadzirwa zveAntivirus hazvishandisi mazuva ano sezvakaitika kare kubvira apo zvityisidziro zvakagadziriswa kudzivisa software yehutachiona. Zvinotyisa zvezuva ranhasi zvakagadzirwa newebhu. IPS (Intrusion Prevention System) inogona kuvhara malware isati yatopinda mumashini.
Shandisa zvigadziriswa zvirongwa zvemashini.
Nhamba shomanana yekushandurwa kune zvigadziridzo inoita kuti kuchengetedzwa kwakanyanya kuwedzere pamushandi. Kushandura mishonga yekugadzirisa zvisizvo kunobatsira kubvisa zvakanakisisa.
Kutyisidzira zvakananga kunogona kudziviswa nekushandisa mitemo pakuronga kushanda.
Kudzora kedhiyo uye mashandisi ekudzivirira mapepa eSyantec anoshandiswa kumira mafaira akachengeteka, kuchengetedza dambudziko rinokosha uye kudzivisa kushandiswa kwevezera rako kune vamwe.
Pakupedzisira, dzidzisai vashandisi.
Dzidzo inoshanda zvikuru mukudzivirira malware. Bvunza vashandisi kuti vanyore chete pane zvinyorwa zvinovimbwa paunotsvaga, kwete kuzovandudza zvikwereti zvakadai se codec, Flash, uye mutambi wemavhidhiyo apo inokurudzirwa nemasipireti asina kufanira, kwete kushandisa mapepa-pe-peer mitambo pamakambani emakambani uye kudzivisa kuisa pazvibatanidzwa kana hukama hunobva pane zvisingazivikanwi. Kutevera zvinotaurwa pamusoro apa zvinogona kubatsira mumwe kuchengetedzwa.